About USAHello | website A ee qaxootiga, waddanka u soo guurey iyo dadka barakacay | USAHello
USAHello waa website a abuuray qaxootiga iyo muhaajiriinta ee Maraykanka.
USAHello waa a one-stop, website dhamaystiran oo ku yaala khayraadka iyo dadka cusub macluumaad u baahan tahay si ay u dhisaan noloshooda guul naftooda iyo qoysaskooda ee dalka Mareykanka.
qaxootiga dib u dejin iyo soo galootiga ayaa iska kaashaday on our content, oo waxa ku qoran talagalay ardeyda af Ingiriisiga iyo kuwa tacliinta kala gooyey. our barnaamijyada waxaa sii xoojinaya turjumaadaha iswada iyo buuga iyo ugu dambeeyay ee farsamooyinka waxbarashada multi-modal. Waxaan u isticmaali kororka of technology mobile iyo xoogga internetka si ay u bixiyaan ammaan, taageero lagu kalsoonaan karo meesha iyo marka loo baahdo.
USAHello waa mid gaar ah.
USAHello waa ilaha kaliya oo dhamaystiran online loogu talogalay qaxootiga iyo muhaajiriinta ee Maraykanka. Newcomers ee gobolka kasta booqo website, iyo waxaan leenahay iskaashi la hay'adaha dejinta iyo kuwa kale-faa'iidada aan dalka oo dhan. Our shaqo dhameystirta ilaha taageerada in hore u jirin iyada oo la samaynaayo iyaga more la fahmi karo oo ay heli karaan kuwa u baahan tahay la-ku-dhulka FindHello, our app mobile bilaabey 2019 oo shuraako la UNHCR.
USAHello waxaa lagu hanuuniyey by dadka u adeegto.
USAHello waa dambaysta la isku xiran bulshada waxaa la isku dayayaan in ay caawiyaan. Waxaan aaminsan nahay in dadka cusub waa gaar ah u dooda ugu wanaagsan ee ay. In ka badan nus ka mid ah xubnaha guddiga waa qaxooti Dejiyo ama ugu horeysay- iyo jiilka labaad ee waddanka u soo guurey. Barnaamijyadannada waxaa sameeyey oo had hagaagtay talooyin ka soo jeeda beelaha cusub, oo ay ku jiraan qaxootiga Technology USAHello iyo Golaha La-talinta.
USAHello waa dhaqaale hufan.
Barnaamijyada of USAHello gelitaanka waa kharash wax ku ool ah. Waxaan u isticmaali xoogga iyo gaari ee internetka, weheliso kororka of technology Xararad, in la abuuro barnaamijyo waa Rowan scalable. Hadafkayagu waa in la caawiyo malaayiin qaxootiga iyo muhaajiriinta ee Maraykanka iyo Sugno bulshada, dhaqaalaheena, iyo dimuqraadiyadda.
Baro sida aad u soo dhaweyn kara dadka cusub ee bulshada.
Booqo goobtayada lamaanahaaga ItaliaHello, bilaabey 2019 si ay u bixiyaan khayraadka soogalootiga ee Europe.